Adidam - WRSP
1939 (3 Nọvemba) Franklin Albert Jones mụrụ na Long Island, New York.
1964-1970 Jones chọrọ eziokwu kachasị, na-eji ọgwụ psychoactive. Ọ gbasoro ọtụtụ usoro na usoro nhazi nke onwe.
1968-1969 Jones nọrọ otu afọ dị ka onye ọrụ / ọrụ oge niile nke Scientology.
1970 Jones kwuru na ya nwetara “oke mmụta.” Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ mgbanwe dị egwu ọ na-azọrọ na ya agbanweela.
1972 Jones's autobiography, Ụkwụ nke Ntị , e bu ụzọ bipụtara ya. Jones malitere ịkụzi ihe.
1973 Jones kwuputara aha mbụ ya, bụrụ Bubba Free John, wee bido ịmụrụ "nzuzu amamihe".
1974 Jones kwupụtara na ya bụ avatar (incarnation) nke Chineke.
1983 Jones nwetara Naitauba, agwaetiti nwere ọtụtụ puku acre na Fiji nke onye omee telivishọn bụ Raymond Burr nweburu.
1985 E gosipụtara ihe ngosi dị egwu nke akwụkwọ akụkọ Jones, na-eduga na mgbasa ozi mba na mgbasa ozi telivishọn nke Adidam.
2008 (27 November) Jones (nke bụzi Ruchira Avatar Adi Da Samraj) nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri isii na iteghete na Fiji.
Franklin Jones bụ onye nchoputa, onye guru, na onye na-elekwasị anya na ndị okpukpe ọhụrụ mara dị ka Adidam. Adidam na-agagharị na Jones, onye ọ bụ ezie na ọ nwụrụ ugbu a, kwuru na a ga-enwupụta ya kpamkpam, Chineke n'ụdị mmadụ, na ebighi ebi dịka eziokwu nke Chineke na isi iyi nke ịkpọte mmadụ niile. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, akụkọ ya dị n'etiti akụkọ ihe mere eme nke otu.
N'akwụkwọ ndekọ banyere ndụ ya, Jones kwuru na a mụrụ ya na-ama ma ghọta ya n'ụzọ zuru ezu na 1939; oge ndụ ya bụ "nsogbu" mgbe ọ na-eji nwayọọ nwayọọ hapụ obodo ya nke nwere obi ụtọ, nke nwere nghọta ka o wee bie ndụ dị ka mmadụ nkịtị. Na mbipụta ọtụtụ nke Knee nke na-ege ntị, akụkọ ọdịmma onwe ya nke onwe ya, ọ sịrị na ọ nọrọ afọ iri atọ sochirinụ iji weghachite "ihie" mmụọ nke bụ ọdịdị mbụ ya. Jones kụziri na ọnọdụ a na-achịkwaghị achịkwa, nke nweere onwe ya, nke mbụ, nke na-enwu gbaa, nke nwere nghọta, nke enweghị uche, enweghị obi ụtọ bụ isi ihe mmadụ niile nwere. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị o mere mgbanwe, ma na-eto, na-ekwu maka ịdị iche nke ọnọdụ ọ buliri elu. Na 1974, o kwuputara na ya bu "avatar," nnabata Chukwu n'ime udi mmadu. Ka ọ na-erule ngwụsị nke ndụ ya, ọ na-ekwusi ike na ọ bụ, "Onye Mbụ na Onye Ikpeazụ na Naanị ọkwa nke asaa Adept (ma ọ bụ Maha-Jnana-Siddha Guru) ịpụta na ngalaba mmadụ (na ngalaba Cosmic nke mmadụ niile na Niile) ”(Adi Da Samraj, nd). (Ihe na-abụghị ọkọlọtọ bụ njirimara nke akwụkwọ akụkọ Jones.) N'adịghị ka ọtụtụ ndị nkuzi mmụọ nke ndị na-eso ụzọ ha na-asọpụrụ dị ka avatar, Jones yiri ka ọ na-azọrọ ọnọdụ dị elu karịa nke ịdị mfe nke Chineke. Jones kwupụtara na ya bụ onye mbụ, onye ikpeazụ, na ọ bụ onye pụrụ iche dị nsọ nke Chineke na-ebili ebe ọ bụla.
N'oge niile ọ na-arụ ọrụ dị ka guru, Franklin Jones mere ugboro ugboro ma ọ bụ nye aha ọhụrụ, gụnyere Bubba Free John, Da Free John, Da Love-Ananda, Dau Loloma, Da Kalki, Da Avadhoota, Da Avabhasa, Ruchira Avatar, Parama-Sapta -Na, n'ikpeazụ na-agwụcha na Ruchira Avatar Adi Da Samraj, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime epithets mbụ na-eji na mgbakwunye na Adi Da Samraj. Ọtụtụ n'ime mgbanwe ndị a na-akpali ihe Jones kwuru na ọ bụ ihe omimi nke evolushọn na nke ọ ghọtara, ọnọdụ Chineke. Maka ịkọwa akụkọ, Franklin Jones ga-akpọ ebe a ma ọ bụ Jones ma ọ bụ Da.
Edere mmepe nke ọrụ ime mmụọ ya nke ọma. Ọ na-amalite site n'oge o doro anya na ọ bụ nwata. Ndị mụrụ ya bụ ndị etiti, ọ bụ ezie na edeghị ọtụtụ ihe banyere ha na ọrụ Jones. (N'ezie, ndị na-agụ mbipụta ikpeazụ nke ikpere mụtakwuo banyere Robert, pusi nke Jones kọwara dị ka "ezigbo enyi na onye ndụmọdụ," karịa ka ha na-eme ezinụlọ ya (Adi Da 1995: 131). Jones nwere ọganihu n'ụlọ akwụkwọ, wee nweta akara ugo mmụta site na Columbia na Mahadum Stanford. Mgbe o nwetara akara ugo mmụta masters na Bekee site na Stanford, ọ gbalịsiri ike ịchọta onwe ya, na-ezere ọrụ, ịgụ ọtụtụ, na ịnwale ọgwụ, ide ederede na omume ndị ọzọ na-echepụta onwe ya nke ọ na-atụ anya ga-ekpughe ọdịdị nke mmụọ. Ọ nọrọ ọtụtụ afọ na California dị ka recluse dị nso na-etinye uche na nyocha ime mmụọ. Ọ na-ekwu na ebumnuche ya oge niile bụ iweghachị "Nchapụta," ọnọdụ nghọta nke mmụọ nke mgbe ọ bụ nwa ọhụrụ. N'ikpeazụ, ọ kọrọ na ọ hụrụ ọhụụ nke ụlọ ahịa ihe ngosi Eshia nke ọ chọpụtara na ọ nọ na New York City. Obi siri ya ike na ọ ga-ahụ onye nkụzi ya n’ebe ahụ.
Jones na enyi nwanyị ya ogologo oge bụ Nina, nke mechara bụrụ nwunye mbụ ya, gafere mba ahụ na New York na 1964 ma n'oge na-adịghị anya, ha hụrụ ụlọ ahịa na ọhụụ Jones. N'ebe ahụ ka Jones hụrụ Rudi (Albert Rudolph, 1928-1973), nke a makwaara dị ka Swami Rudrananda. Rudi o doro anya na ọ hụrụ Jones dị ka onye na-enweghị ọzụzụ na onye umengwụ; Rudi jụrụ ịkụziri Jones ruo mgbe ọ nwere ọrụ ma hichaa ndụ ya. Jones kọrọ na ya ji obi ya weghachite onwe ya na iwu Rudi, n'ihi na o kwenyere na Rudi nwere ike ibunye ihe pụtara ìhè, na-agbanwe ike ime mmụọ. Rudi kpọrọ ike a "Force". (Nke a mere ọtụtụ afọ tupu George Lucas ejiri okwu ahụ mee ihe na ya Star Wars ihe nkiri.) Ịnye ike nke ime mmụọ (akpọ Shakti na Sanskrit) na imesi ike na ịdọ aka ná ntị ga-emesị ghọọ akụkụ ndị pụtara ìhè nke usoro izi ihe nke Jones.
Mgbe Jones na Rudi nọrọ ọtụtụ afọ, Jones malitere iche na ya erutela ọnwụ ime mmụọ. O mezuru ihe niile Rudi chọrọ, gụnyere ihe na-adịghị mma ọ chọrọ ka ọ gụọ na seminar nke Lutheran. Ọ bụ ezie na ahụmịhe seminarị ahụ dị mkpụmkpụ, site na ihe Jones kọwara dị ka ma ọ bụ ajọ ụjọ ọgụ ma ọ bụ mmepe mmụọ (Jones 1973a: 60-63), ọ ga - abụ na ọ ga - enweta mmụba site na agụmakwụkwọ ọ nwetara. Ọ bụ ezie na ọ mụtara ọtụtụ ihe n'ime afọ ya na Rudi, o kpebiri na ya anọghị nso na-aga n'ihu, ọnọdụ enweghị obi ụtọ nke ọ ecụ ọ chọrọ. Rzọ Rudi chọrọ ọrụ ime mmụọ na-enweghị atụ.
Site na ndụmọdụ Rudi, Jones kpebiri ịga India iji zute Swami Muktananda (aka Baba Muktananda, 1908-1982), onye isi Rudi. N'ime oge ọtụtụ njem gaa India, Jones kọrọ na ọ nwere ọtụtụ ọkụ ime mmụọ dị omimi. O mechara nye Swami Muktananda akwụkwọ ozi na-akwado nkwenye ya (Jones). Edere akwụkwọ ozi otu peeji nke Jones natara ka eji aka ya dee n'asụsụ Hindi ma tụgharịa ya ma kọwaa ya ọtụtụ oge. Na nsụgharị ya ndị ọzọ, ọ na-agụ dị ka a ga - asị na Jones dere ya n'onwe ya. N'agbanyeghị ihe ọ bụla dị na ya, a na-edekarị akwụkwọ ozi ahụ iji gosipụta na mmata mmụọ nke Jones ghọtara na agbụrụ ndị India.
N'ime oge nkuzi ya niile, Jones gbalịsiri ike igosipụta izi ezi nke mmụta ya. N’otu aka, o kwuru na ya gabigala onye nkuzi ime mmụọ niile dịgoro ndụ; mmezu ya ka ukwuu, nwezu oke ma nwekwaa atule kari onye ozo. Ihe omuma ya kariri nke Muktananda, Ramana Maharshi (1879-1950), Jisos, Buddha, na ndi ozo ndi ozo ama ama. Ọ chọghị nkwado ọ bụla n'aka onye ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ọ gbalịsiri ike na-agba mbọ igosipụta na Swami Muktananda, onye isi ọma nwere ọtụtụ akụkọ (lee Rodamore nd) nyere ya ikike izi ihe. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe mgbagwoju anya nke a ga-ahụ na akụkọ ndụ Jones.
N'etiti njem ya na India ka ya na Muktananda nọ, Jones wepụtara otu afọ iji mee Scientology , na-enweta nlezianya nyocha na ịrụ ọrụ zuru oke maka nzukọ ahụ. Isi nke ikpere nke ahụ metụtara Scientology na-ahụ naanị na mbipụta mbụ, ọ bụ ezie na edepụtara ya nwa oge na "The Beezone," saịtị nwere nnwere onwe nke na-akwado Adidam na ntanetị. Ọ dị ka ọ dị na atntanetị ugbu a. N'isiakwụkwọ ahụ, Jones kọwara otú mmasị mbụ ya na Scientology kwụsịrị mgbe ọ chọpụtara na usoro ya na-ekwu maka ọdịnaya nke uche, ọ bụghị nsogbu bụ isi nke ịmara. Jones katọkwara L. Ron Hubbard, onye guzobere Scientology, na-ekwu na Hubbard nwere mmasị naanị n'ike, ọ bụghị amamihe ma ọ bụ nnwere onwe ime mmụọ. Ka o sina dị, Jones na-akọ na enwere ọganihu pụrụ iche na nyocha, na-eru "Clear" ma na-agafe ọtụtụ ọkwa OT (Operating Thetan) naanị otu afọ. (Jones amaghị ihe ọ bụla mgbe ọ na-akọwa ọganihu ya site na ọkwa nke OT nke Scientology, yabụ na-edoghị anya etu o siri gaa.)
Na Mee nke 1970, Jones laghachiri Nina, bụ nwunye ya ugbu a, na Pat Morley, bụ enyi nwanyị, mana afọ ojuju na nnabata ya na ahụmịhe ya na ashram nke Muktananda enweghị afọ ojuju. Otu ụbọchị na ashram, Jones hụrụ ọhụụ nke Virgin Mary nke zigara ha atọ njem njem gaa ebe nsọ dị na Israel na Europe.
Ka ọ na-erule August nke 1970, mmadụ atọ ahụ bi na Los Angeles, mgbe Jones tụgharịrị uche oge zuru ezu. Na Septemba nke afọ ahụ, ọ na-azọrọ na enwere nkọwa zuru oke, nkuzi na-adịgide adịgide na Ụlọ Nzukọ Hollywood nke Vedanta Society. Nke a bụ otú o si kọwaa ahụmịhe ahụ (maọbụ, karịa nke ọma, na-adịghị ahụmahụ) n'ụlọ nsọ ahụ: "Anọ m na-anọdụ ala n'ebe ahụ ma mara ihe m bụ ... Abụ m Ezigbo, Onwe, na Nature na Nkwado nke ihe niile na mmadụ niile. Abụ m Onye Mbụ, nke a maara dịka Chineke, Brahman, Atman, Otu Mind, Onwe "(Jones 1973a: 134-35). Jones jiri afọ ole na ole sochirinụ jikọta nghọta ya na ọgụgụ ya, jiri nwayọọ nwayọọ na-eso ndị na-eso ụzọ na-aga n'ihu na ịkwadebe maka ọrụ nkụzi ọha na eze.
Na 1972, Jones malitere izi ihe na ụlọ nzukọ na azụ Ashram Books (emesia Dawn Horse Books), akwukwo ime mmụọ ya na ndi enyi ya ole na ole meghere na nso nso a na Los Angeles. Site na nke a, Jones nọ na-arụ ọrụ dị ka guru nọọrọ onwe ya ma na-emepe ụzọ nke ya. Ya na Rudi na Muktananda agbawaala, na-ekwenye na ha aghọtaghị ezi ọnọdụ ime mmụọ ya nakwa na ọ bịaruteghịkwa ogo ya. (Jones weghachitere kọntaktị na Rudi, tupu ọnwụ nke ikpeazụ ahụ na 1973, mana ọ na-akatọkwu Baba Muktananda, ebe ọ ka na-amata ọrụ dị oké mkpa nke Baba na nyochaghachi ọnọdụ mbụ ya.)
Ọbụna tupu ya amata na Templelọ Nsọ Hollywood, Jones azụlitewo aha maka ikike nke ịkpalite ahụmịhe ime mmụọ na ndị ọzọ. Nkesa a ghọrọ akara nke ọrụ izizi ya izizi wee mee ka ọ pụọ iche na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị gurus na ndị nkuzi na-arịọ arịrịọ mmụọ ime mmụọ nke America. Ọ dịkwa nkwupụta okwu, na-atọ ọchị, nwere ntụkwasị obi nke onwe ya, na ọ dị obere, nke gbakwunyere na mkpesa ya. O yiri ka ọ maara ọtụtụ ihe gbasara ntụgharị uche na nghọta nke a na-enweghị ike ịmụta site na akwụkwọ ndị dị n'oge ahụ (Lowe na Lane 1996).
Jones 'mbụ akwụkwọ, Ụkwụ nke Ntị , pụtara na 1972 ma bụrụ ndị ọ nabatara nke ọma site na ndị na-agụ ya. Okwu mmalite nke Alan Watts, onye edemede na ọkà okwu a na-asọpụrụ nke ukwuu, nyere Jones nsọpụrụ ozugbo na counterculture. N'ụzọ dị ịtụnanya, mmasị Watts dabere kpamkpam n'ike ike nke ide ihe Jones; ha abụọ ahụghị ihu na ihu. Nke a bụ mmalite nke ụkpụrụ. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ọtụtụ ndị nwere mmasị kwadoro nnukwu nghọta ime mmụọ nke Jones dabere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị n'akụkụ ederede ya.
N’oge na-adịghị anya, Jones bidoro igosipụta obi erughị ala nke ụmụ akwụkwọ ya na-akwadoghị maka ezigbo ọrụ ime mmụọ. Na nzaghachi, ọ malitere ịtọ ọnọdụ na ihe achọrọ maka mmalite ndị na-eso ya. Mgbe 1972 gasịrị, a na-echebe Jones ka ọ ghara iso ndị nkịtị na-akpakọrịta. Naanị ndị na-efe ofufe bụ ndị gafere usoro agụmakwụkwọ na usoro ibi ndụ edepụtara ka enyere ya ohere, ma mgbe ahụ naanị n'ọnọdụ ejiri njikwa. N'ime ndụ ya niile, o biri ndụ dị nchebe nke ukwuu na ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke obodo ya, ọbụnadị ndị na-akwado ọrụ ya anaghị anabata ya. Dika enwere ike kpebisie ike, onye odeakụkọ ma ọ bụ ndị ọzọ na-abụghị ndị gbara ajụjụ ọnụ gbara ya ajụjụ ọnụ, ọ nweghịkwa mkparịta ụka n'ihu ọha, ma ọ bụ ọbụna mkparịta ụka, ya na ndị nkuzi mmụọ ndị ọzọ na United States. O nweghị ndị ọgbọ.
Na 1973, mgbe ọ gachara njem ọzọ na India, Jones kwupụtara nke mbụ n'ime ọtụtụ mgbanwe aha; ọ bụ ugbu a ka a ga-akpọ ya Bubba Free John. Ọ kpaliri etiti nke usoro ọ na-eto na Northern California. Ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-eso ụzọ ya biri na Bay Bay, ebe Jones na ndị otu ya kwagara ebe a na-egwu mmiri ọkụ a na-akpọ Seigler Springs, mana n'oge na-adịghị anya, e degharịrị "Persimmon". Na ngwụsị izu, ndị na-efe ofufe na-esi na Bay Bay gaa Persimmon, na-arụsi ọrụ ike iji gbanwee ebe mgbada ahụ gaa na ebe izu ike mara mma. Mgbe ọ nọ na Persimmon, nkuzi Jones gbanwere n'ụzọ dị egwu.
Jones, nke a na-akpọzi Bubba Free John, mepụtara oge nke nnwale nke izu izu nke ịgha anụ ọhịa na ịchịkwa isi nke antinomia ga-ejikọta izu ole na ole njide onwe onye, ​​ibu ọnụ, na ịdọ aka ná ntị ime mmụọ. Ndị na-efe ya amaghị ihe ọ ga-atụ anya ya, ebe Jones na-eme mgbanwe ndị dị na obodo ya na njikwa oge na-enweghị atụ. Ka Jones na-eduzi obodo ya na ihe ndị a na-eme na bacchanal, Jones kwuru na ya na-akụziri ha ka ha hụ ọdịdị anụ ahụ ha na nke anụ ahụ ha. Ọ na-ekwu na ihe o mere adịghị adabere n'ọchịchọ nke ya ma ọ bụ nanị nzaghachi amamihe nye nke ha; ọrụ ya dị ka guru bụ ije ozi dị ka igwe dị ọcha nke na-egosipụta ntinye aka na-adịghị mma nke ndị na-efe ya.
Egwu na Chineke, akwụkwọ nke okwu a kpokọtara site na oge a nke nkuzi ya, na-egosi otu obodo kwadoro ma nwee obi ụtọ ahụmahụ ebube na atụmanya nke uto ime mmụọ ngwa ngwa. N'oge na-adịghị anya mgbe akwụkwọ nke Garbage , Dawn Horse Press, ngwa ngwa nke Jones, gbalịrị icheta ma gbaa akwụkwọ niile ederede (Kripal 2005). O doro anya na mmadụ kpebiri na omume "nzuzu amamihe" ahụ a kọtara na ederede doro anya nke ukwuu maka oriri ndị mmadụ.
Na 1979, Jones kwupụtara, "Onye M hụrụ n'anya, M Na" (Lee 1998: 339), ma mesịa kpọọ aha ya bụ Da Free John, na-edepụta ọtụtụ aha ndị na-agụnye syllable Da. Dị ka Jones si kwuo, Da bụ okwu oge ochie n'asụsụ dị iche iche nke pụtara "Onye nyere ya." (Ọ nwere ike ịpụta na na Sanskrit.) Ozizi ya nọgidere na-agbanwe, tinyere aha na utu aha ya.
N'ime iri afọ ndị na-abịanụ, Oge nkuzi ndị ọzọ gbanyere oge na idebe ihe, ide ihe, na ịme ihe. Ka ọ dị ugbu a, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na-efe ya bi na ma ọ bụ nso Adidam obodo, ọtụtụ n'ime United States, Europe na Australia, na-eso ntụziaka ime mmụọ zuru ezu, na-arụ ọrụ oge niile, na-agbalị ịmanye ọtụtụ ndị na-eso ụzọ.
N'agbanyeghi otutu ederede nke Da na otutu akwukwo, ndi obodo ya jiri nwayọ too ma site na otutu akuko adighi abawanye kariri ndi otu aka 1,000 n'oge obula, obu ezie na ikekwe 20,000 ma obu ndi choro ime mmuo abanyela na nzukọ ya n'oge dị nkenke afọ iri anọ gara aga. Otu ihe kpatara ntakịrị nke ndị na-eso Da, ma e jiri ya tụnyere, kwuo, na nke Muktananda ma ọ bụ Ammachi (1952-), nwere ike ịchọta Da jụ ịjụ isonye na mgbasa ozi ọha. Ndị ọzọ na-agụnye ụzọ na-arịwanye elu na-esiteghị na ya gosipụta onwe ya na foto Adidam na arụmọrụ na-eto eto nke prose ya.
Ndị na-esote onye nwere ike ịbịa ya ma gosipụta nraranye ha maka ọnwa ole na ole, na-aga ọmụmụ ihe, otu ụzọ n'ụzọ iri (mgbe iri pasent abụọ nke ego), na ịbanye na nzukọ ya, tupu ha enwee ike ịnweta ọnụnọ ya n'ihu ya. Oge ikpe ikpe a meela ka ndị na-eso ụzọ ọhụrụ jiri nlezianya kpuchie ma na-akpakọrịta tupu ha ahụ guru; o mekwara ka ndị na-agbanye mgbọrọgwụ ga-enwe nchekwube mgbe e mesịrị nye ha ohere ịhụ Da. Olileanya a nwere ike ime ka ha nwekwuo ahụmahụ nke guru na ndị a kpọrọ ya shakti , ma ọ bụ ume ime mmụọ. O doro anya na ọ bụ nanị mmadụ ole na ole dị njikere itinye oge, ego, na mgbalị dị mkpa tupu ha enwee ike ịkwụ ụgwọ ime mmụọ ma ọ bụrụ na ha amaghị.
Da na-esiwanye ike ịtụgharị uche na-akụda ndị nwere ike ịbụ ndị na-eso ụzọ. Ndị na-agụ akwụkwọ na-achọsi ike ịmalite otu n'ime akwụkwọ Da na ụlọ ahịa ga-ezute ozugbo na ederede ederede nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Onu ogugu ahia nke oru Da mechara di ala. Ọ bụ ezie na Da bụ onye na-ekwu okwu na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ laa azụ na 1970s, ọrụ ndị ọ mechara dee dị oke egwu. Nsonaazụ ntanetị bụ na e guzobere nzukọ ya n'ụzọ na-egbochi mgbasawanye, n'agbanyeghị ọchịchọ Da kwuru ime ka ụwa dum bilie. Ọ kpọrọ onwe ya "Onye Nkụzi Worldwa," ya mere ọdịda nke obere nkwụsi ike ya nke na-esote itolite na-ewute ya nke ukwuu ("Adi Da Na-atụle Ọdịda nke Afọ 30 gara aga" 2001).
Emepụtara usoro na ụkpụrụ dị iche iche maka ndị na - efe Da, bụ ndị kewara n'ime ọgbakọ atọ nke hierarchical dabere n'ogologo oge ha n'okpukpe, nghọta mmụta ha banyere nkuzi Da, "ntozu oke" ime mmụọ ha, na itinye ego ha. (E meela ọgbakọ nke anọ maka ndị ọdịnala na ụmụ amaala kemgbe.) onyinye enyere n'aka ụmụazụ. Site na akụkọ niile, Da na ezinụlọ ya chọrọ nnukwu ego iji nọgide na-ebi ndụ okomoko, yabụ ndị na-arụsi ọrụ ike na-faịlụ na-arụkarị ọrụ ego.
Na ya afọ ndị ikpeazụ, Ọ nọrọ oge dị ukwuu na Fiji na-arụ ọrụ na nka foto ya ma na-eme ihe iji guzobe ihe nkwado ime mmụọ na afọ ojuju. O kwuru na foto ya abụghị ihe ntụrụndụ ma ọ bụ ntụrụndụ nke onwe ya, kama ọ bụ ụdị okwu ime mmụọ; ihe otutu ichotara n'ogo ya di iche iche na-eme ka mmadu nwepu onwe ya ("Ngbawa nke Transcendental" 2013).
Ọ nọgidere na-ede akwụkwọ ederede ma na-ebipụta oke ego, na-azọrọ "ikike nwebisiinka" maka ọrụ ya na ihe ọ bụla ọzọ nke ndị obodo ya mepụtara, iji hụ na nchekwa ha kwesịrị ntụkwasị obi. Nke a nwere ike ịbụ ihe dị mma maka ihe odide ya, n'ihi na mbipụta kachasị ọhụrụ nke akwụkwọ mbụ ya dị obere ma na-esiri ike ịgụta karịa nke mbụ, ugbu a enweghị akwụkwọ, nsụgharị.
N'otu oge, Da kwadebere ịmepụta "ndụ dị ndụ" iji nọgide na-enweta ngọzi ime mmụọ ya mgbe ọ nwụsịrị. Okwu Sanskrit murti pụtara ihe oyiyi e doro nsọ ma jiri ya na India na-ezo aka n’ihe akpụrụ akpụ na eserese nke chi dị iche iche. Murtis dị ndụ nke Da ga-abụ mmadụ bụ ndị ga-esi n'ụzọ ọ bụla bupụta nke onwe ha, iji jupụta n'ike nke Da nke ha ga-enwe ike ịnyefe. Ọ dị ka a ga - asị na ha ga - arụ ọrụ dị ka batrị mmụọ mmadụ na - abụghị mmadụ, juputara na chi nke Da. Ebuputara atumatu a n'enweghi obi uto maka imeputa saịtị ndi ikike. Da na-atụgharị uche ma na-eduzi ememme iji nye ike dị nsọ n'ụlọ nsọ ọ bụla nke Adidam. Shlọ arụsị ndị dị nsọ ga-enwe ike ha iji zipu ike mmụọ nke Chineke ruo ọtụtụ puku afọ, ọ bụrụhaala na ndị na-enweghị mmetụta ma ọ bụ ndị na-adịghị njikere mmụọ na-emerụ ha. O doro anya na ndị na-efe ofufe kwenyere na ndị nlere anya nwere agwa na-adịghị mma nwere ike ibibi ikike ngọzi nke ebe arụsị.
Na 27 November 2008, mgbe ọ na-arụ ọrụ na foto ya na ụlọ nsọ Fijian, Da dara nwụrụ site na oke nkụchi obi. Mgbe ọ bịara doo anya na ya agaghị akpọlite ​​n’ọnwụ, n’agbanyeghi na olile anya nke ime ime ya, etinyere ahụ ya n’ili o dobere ọtụtụ afọ gara aga. Ili Da (mahasamadhi na Sanskrit) n'àgwàetiti Naitauba ugbu a ka ndị na-eso Adidam na-ahụta dị ka ikike mmụọ kachasị mkpa n'ụwa. Ndị na-ekwenye ekwenye kwenyere na Da ka dị ma na-eme n'ụwa-ọ bụghị dịka mmadụ, kama dị ka ike na ìhè nke Chineke. N'ụzọ dị ịtụnanya, n'ihi nnukwu edemede ya na ibi ndụ mara mma, profaịlụ ọha na eze, na ndụ na ọnwụ, ka dị ala.
Kọ akụkọ banyere ozizi ime mmụọ nke Jones na nkwenkwe bụ isi bụ ihe ịma aka na-adọrọ mmasị. Akụkụ nke ihe isi ike na ịtụle Da sitere na nkwupụta nke isi mmalite. O bipụtara ma ọ dịkarịa ala akwụkwọ iri asaa dị iche iche n'oge ndụ ya, iri abụọ na atọ n'ime ha bụ ndị ọ kpọrọ "ederede ederede." (Ranker.com depụtara aha 147, ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime "akwụkwọ" ndị a yiri ka ọ bụ ihe ederede sitere na ọrụ ndị dị ogologo.) Ọtụtụ n'ime isi ihe ederede Jones dị ogologo ma wepụta ha n'ọtụtụ mbipụta ndị dịgasị iche na ọdịnaya. Nke a pụtara ìhè karịsịa na Ụkwụ nke Ntị , nke toro na oke ma gosipụta ederede buru ibu na mbipụta ndị na-esote. N'ime iri afọ ole na ole nke ndụ ya, Jones bipụtara "New Edition Editions" nke ọtụtụ ọrụ ya, n'ime mgbalị iji chekwaa nkuzi ya maka ụmụ ya n'usoro, nke ikpeazụ, akwụkwọ ikikere. (Ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta mgbe ụfọdụ na-ebipụta mbipụta ọhụrụ ọhụụ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ oge ochie, dị ka Akwụkwọ Nsọ, nke ọtụtụ ndị na-edegharị na-achịkwa ọtụtụ narị afọ, ọ bụ ihe na-esighi ike ka onye edemede dee ha maka ọrụ onwe ya bipụtara.
Mgbe Jones malitere izi ihe na 1972, ihe owuwu ihe ndị dị na ya dị ka Vedanta, usoro usoro Kashmiri Shaivism, na ozizi Swami Muktananda. Ọ bụ ezie na ọ na-azọrọ na nkuzi ya zuru ụwa ọnụ, ọ bụghị Eastern ma ọ bụ n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, a na-eme ka mgbọrọgwụ Vedantic-Hindu siri ike doo anya na usoro nkwenkwe ya na omume ime mmụọ. Okpukpe Hindu na-enweta dị ka karma, ịmụghachi mmadụ, nnwere onwe ime mmụọ, ofufe guru, na ọtụtụ ndị ọzọ nkwenkwe na omume ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-ewere ihe n'echeghị echiche ma bụrụ ndị ezi-okwu. Jones kụziri na onye ahụ n'onwe ya bụ site na Chineke, dịka obi ụtọ, na ebighi ebi. Onye nke onwe ya, ma obu Atman, bu n'ezie onye ozo karia Brahman, ma obu Chineke. Ụmụ mmadụ anaghị enweta ọnọdụ nke Chineke dị ugbu a n'ihi nkwalite nke onwe ha na ntụgharị uche nke onwe ha, nke na-eduga ha n'inyocha na-adịghị agwụ agwụ maka ihe ahụ bụ ọdịdị ha n'ezie. Jones gosipụtara ọchụchọ a na akụkọ ifo Gris nke Narcissus, chi ahụ nwere obi ụtọ n'echiche ya na ọ dabara na-eche echiche banyere ọdịdị nke ya. Eziokwu, Jones na-azọrọ, bụ tupu eche echiche na ntụgharị onwe ya. Ọ bụ ezie na ọ na-adị mgbe niile, ọ ghaghị inwe mgbanwe zuru oke iji mee ka ọ bụrụ ihe dị adị n'ezie.
Ikekwe ihe kachasị emetụta ihe ọgụgụ isi nke Da bụ echiche ya banyere usoro asaa nke ndụ. Ọ bụ ezie na Da nwere ike ịbụ sitere na echiche nke Erik Erikson na Jean Piaget, o mechara nwee ọganihu n'ụzọ ọ bụla nke ndị mbụ ya gaara atụ anya. Dị ka Da kọwara n'oge dị ogologo, akụkụ atọ nke mbụ na-akọwa njirimara nke uche na nke anụ ahụ nkịtị. Ọ bụ ezie na mmadu kwesiri iduzi ndi ato a site na mgbe ha gụsịrị akwụkwọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ mmadụ anaghị eto eto karịa ha. Ihe nke anọ na nke ise bụ ebe ezi mmalite ime mmụọ malitere; nke a bụ ebe Debe nyere ọtụtụ n'ime ndị na-agba ọsọ ya, oge gara aga, ugbu a nakwa n'ọdịnihu. Nke isii bụ ọnọdụ zuru oke nke nzuzu-naanị, ebe ọhụụ na-amaghi ụwa nke ọzọ. Nke a bụ nke kachasị onye ọ bụla, tupu Da, agafebeghị. Nke asaa bụ ọnọdụ pụrụ iche nke Da, nke otu n'ime ha zuru okè, nzụlite na-enweghị atụ na ụwa anụ ahụ bụ n'ụzọ zuru ezu, na-aghọtaghị mgbalị. Otu nọ na steeti a na-enweta sahaja samadhi , ihe omuma nke ndi mmadu ndi ozo, mgbe ha no n'ime ihe nile.
Site n'oge mbụ mbipụta nke ikpere e bipụtara ya, Jones kwuru na ya anaghịzi echebara onwe ya echiche kama ọ tụgharịrị uche na ndị ọzọ, ụfọdụ ndị maara ya na ndị ọzọ amaghị. Usoro a nke "ịtụgharị uche na ndị ọzọ" yiri ka ọ bụ ihe ndabere nke ọrụ "ọrụ ngọzi" ya, nke o kwuru na ọ na-atụgharị uche na ọtụtụ mmadụ. Dị ka akụkọ ndị na-efe ya si kwuo, Jones enwere ike ịgbanwe mgbanwe nke ndị ọzọ site na ya siddhi, ma ọ bụ ike ime mmụọ.
ỤLỌ / NKWUO
Site na 1972, Da na ndị na-eso ụzọ ya na-anwale, na-eri nri ndị anaghị eri anụ nke ọma, na-ekwusi ike na nri ndị dị ndụ, na-ebu ọnụ, enemas, hatha yoga, na ọrụ ndị ọzọ ọ na-atụ anya ga-eme ka ndị na-efe ya nabatara ike ime mmụọ ọ na-egbu . Na ntụziaka mbụ ya, Jones kụziiri ndị na-efe ofufe ka ha na-atụgharị uche kwa ụbọchị n'ihu foto ya, na-ajụ onwe ha "Izere mmekọrịta?" Nke a yiri nke yiri usoro nke ịjụ mmụọ, jiri ajụjụ bụ "Ònye Ka M," nke Ramana Maharishi kwadoro dị ka ụzọ nke na-egbutu ya na isi nke ịbụ. Jones kwusiri okwu ike satsang , nzukọ nzukọ nke ndị na-efe ofufe na-anọdụ n'ihu nna ukwu. Ebe nrụọrụ weebụ Adidam nwere ọtụtụ akụkọ banyere ahụmịhe ime mmụọ dị ike nke ndị na-efe ofufe na-akọ na ọnụnọ Jones ("Akaebe nke Onwe nke Avatar Adi Da Samraj" 2008).
Site na nmalite nmalite a, Adidam na - abanye n'ime ndu ndi ozo. Ndị ji obi ha dum na-etinye aka na-agbaso ihe omume niile mbụ, ma na mgbakwunye, ha na-arụ ụdị ọzụzụ mmekọahụ dị iche iche, na-eme omume Hindu pujas na aratis (ememe ofufe a na-efe efe na onyinye), buo abụ olu na ederede dị nsọ, gụọ ọrụ Da kwa ụbọchị, otu ụzọ n'ụzọ iri, rụọ ọrụ na nzukọ a, were "nkwa ebighi ebi" na-ekekọta ha na Da, ma gaa njem njem gaa na saịtị dị nsọ nyere ikike nke okwukwe. Adidam aghọwo okpukpe mgbagwoju anya, nke tozuru etozu, nke nwere kalenda emume / liturji, emume dị nsọ, akwụkwọ nsọ dị oke ọnụ, yana ọtụtụ ihe achọrọ iji mee ka ndị na-efe ofufe na-arụ ọrụ ọtụtụ oge.
Da na-etinyekarị ihe ndị na-achọsi ike nye ndị na-efe ya, ọkachasị n'afọ ndị mbụ nke njem ya, nke ọ gosipụtara dị ka ụdị nkuzi "nzuzu". Da kwuru na ezigbo guru ọ bụla nwere ike iji ụzọ amamihe dị nzuzu gafeelarị ụkpụrụ ụkpụrụ omume niile. Ya mere, o nweere onwe ya iji aghụghọ ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị omume rụrụ arụ ma ọ bụ mkparị, iji kpọtee ndị na-efe ya ụra ụra ime mmụọ ha. Da mebiri alụmdi na nwunye nke ndị na-efe ya ofufe, ekenye ndị mmekọ ọhụụ, chọrọ ka ndị na-efe ofufe na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya, gba ọtọ ọtọ, na-ese foto inwe mmekọahụ, na itinye aka na omume ndị ọzọ, ọbụlagodi na-emebi iwu. Ihe ọ bụla ọ na-achọ ime, o doro anya na ọ dị irè na-eme ka ndị na-efe ya kwenye na ha na-ekere òkè na njem dị egwu, ọ bụrụ na ọ na-afụ ụfụ. .
Dika nkuzi nke Da gbanwere, bhakti, ma obu ofufe ofufe, mechara weghachite ajuju nke mmuo dika uzo kachasi nma igbanwe ndi Adidam. O doro anya na Da kpebiri na ndị na-efe ya nwere ike gbanahụ echiche nke onwe ha, na-eche echiche banyere onwe ha site n'itinye uche ha niile n'ebe ọ nọ. Kama ikwe ka uche ha kpafuo, megharia uche ha site na obere nchegbu ha na ihe omuma nke echiche nke ezi uche, ndi n’enye ya kwesiri itinye obi ha, aru ha na uche ha nudi nke onye-isi ha, “Onye-Ozizi Uwa” na Ruchira Avatar, na si otú a na-etinye uche gị na Chi Ya nke Chineke. Agbanyeghị na nke a dị ka ofufe onye guru nke Hindu, Da kpọrọ usoro a "Ruchira Avatar Bhakti Yoga" ma kwuo na ọ bụ mkpughe pụrụ iche. Nke a bụ otú o si akọwa yoga:
Ọ bụrụ n ’ịghọta“ njiri onwe ”(na ịchọ ihe niile)“ Radically ”(ma ọ bụ“ Na Root ”) site na anszọ Nkụzi Ozizi M, mgbe ahụ ị nọ n’ ọnọdụ nwere ike ị nweta ikike Acausally (nke Means of My Divine). Avataric Transcendental Grace Ime Mmụọ) iji bụrụ onye guzosiri ike na ya na ka nke ahụ dị tupu "njide onwe onye", ma ọ bụ nke ahụ na Ọnọdụ nke "njikwa" onwe ya na-ebili. Ya mere, "Radical" (ma obu "At-The Root") "nghota nke onwe", nke enyere aka site na uzo nke ihe nkuzi m, na-enye gi ohere ibido Ezigbo (ikwesiri m ike ma jiri obi m na-aza) omume nke Naanị-nke m ka ekpughere ma nye m ụzọ nke asaa nke Adidam (Adi Da 2009).
Ruchira Avatar Bhakti Yoga na-etinye ahụ ike dị iche iche n'ahụ Da. A naghị ahụ ya dị ka ụdị mmadụ dị mfe nke anụ ahụ na ọkpụkpụ mana dịka ngosipụta zuru oke nke Chineke, ma ọ bụ "Ezigbo Chineke" dị ka Da si kwuo ya. Ahụ Da abụghị mgbe niile ka ọ dị nsọ karịa, n'eziokwu, mmụọ ya na-apụkarị na anụ ahụ ya, mana mgbe otu n'ime ahụmịhe ọhụụ ya na-eru nso ọnwụ, Da kwuru na Chineke agbadatala n'ụdị anụ ahụ ya, nke mere ya ihe zuru oke maka echiche nke onye na-efe ya. Ugbu a Da nwụrụ anwụ, a na-ahụ ebe ili ozu ya na Fiji na ebe nsọ ya ndị ọzọ nyere ike dị ka ebe pụrụ iche dị egwu maka ndị na-eso Adidam.
Okpukpe / obodo Ndị e debere aha ha amarala ọtụtụ aha, gụnyere Shree Hridayam Satsang, The Dawn Horse Communion, Chọọchị Mbụ nke Na-ahụ Maka Ndị Chineke, The Crazy Wisdom Fellowship, The Johannine Daist Communion, The Adendedayana Buddhist Communion, The Eleutherian Pan- Mkpakọrịta nke Adidam, na ndị ọzọ. Da ọma na-egwuri egwu na aha. Ugbu a, a na-akpọkarị Adidam, ndị na-eso ụzọ bụ "Ndị na-ada."
Ka oge na-aga, Da nwetara ọtụtụ "ebe nsọ," na mgbakwunye na Persimmon (nke a na-akpọ The Mountain of Attention Attention). Nke kachasị mkpa n'ime ndị a bụ àgwàetiti Fiji nke Naitauba, nke òtù ya nwetara na 1985. Onye ọzọ dị na Kauai. E nwekwara ebe nsọ na Washington State na ebe nsọ nke abụọ na Northern California. Dabere na foto dị na Ịntanetị, ihe ndị a nile mara mma mara mma, tinyere ebe ndị mara mma na ụlọ nsọ. O di nwute, ndi mmadu na-abanye n'ime ebe a na-emechi ya; n'ihi ikemokwu nke ime mmụọ ha bụ ebe ndị dị n'ime na-emeghe naanị ndị na-etinye aka. ("Gaa na Sanctuaries nke Adidam" nd) Ọbụna mgbe ọ na-alaghachi na ebe nsọ ya, a na-ejikarị otu obi na-eguzosi ike n'ihe gbara ya gburugburu, gụnyere ndepụta mgbanwe nke "ọtụtụ ndị nwunye" na "na-atụ egwu."
N'oge ndụ ya, e kwenyere na Da na-eji aka igwe na-achị alaeze ya niile, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ọ bụla na akụ Adidam na-achịkwa ntụkwasị obi. Ebe ọ bụ na ndị nlekọta niile ahụ bụ ndị na-efe ofufe bụ ndị kwenyere na Da bụ "Ruchira Avatar," "Ezigbo-Chukwu," na "Onye Nkụzi Worldwa," ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ha esoghị ntuziaka ya n'ikwesị ntụkwasị obi. Ndị gbara okpuru sitere na gburugburu ekwuola na nke a bụ eziokwu. Ugbu a Da na-apụ, ndị nlekọta nwere ike ịnwe ezigbo ike, mana nchịkwa nke usoro ahụ ka siri ike.
O mere mgbalị siri ike iji hụ na okpukpe ya ga-aga n'ihu mgbe ọ nwụsịrị kpọmkwem dịka o siri hiwe ya, mana o doghị anya etu nke a ga-esi rụọ ọrụ n'eziokwu ebe ọ bụ na okpukpe niile na-agbanwe. Dịka onye mmụta okpukpe dị nkọ, Da ga-amarịrị nke ahụ. O doro anya na o chere na okpukpe ya ga-ewepụ iwu. Da kwenyesiri ike, dịka o nwere ike, na ọ gaghị enwe ike ịbụ onye nchịkwa mmadụ ga-anọchi ya-ọ bụ onye mbụ, onye ikpeazụ na naanị ọkwa nke asaa na-agba agba-mana ọbụlagodi nke a nwere ike ịma aka n'oge ụfọdụ n'ọdịnihu. Ruo ugbu a, ma ọ dịkarịa ala site n'echiche nke onye si mba ọzọ, okpukpe yiri ka ọ na-ejide; ọ bụrụ na e nwee mgba ndu ndị isi, ndị mmadụ anaghị ahụ ha.
Ikekwe maka ịmara eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị na-efe ofufe ka dọtara n'okwukwe, Adidam kewara ugbu a n'ọgbakọ anọ nke na-ebelata nkwụsi ike. Nke mbu bu ezigbo onu ahia ma buru ndi oru kachasi ike nke ndi nkuzi nke ime mmụọ. Ọgbakọ nke abụọ ka na-achọ ihe dị oke mkpa, mana ọ gụnyere ụmụ akwụkwọ nwere nghọta pere mpe na ikekwe enweghị nsọpụrụ zuru oke. Nke atọ bụ maka ndị na-eche nraranye maka Da ma na-etinye ego, mana ndị na-adịghị njikere maka ịdọ aka ná ntị nke okwukwe. A ka kwere ka ndị nọ n’ọgbakọ nke atọ sonye n’omenala okpukpe ndị ọzọ. Nke anọ bụ ikekwe ihe kachasị iche. Ọ bụ naanị ụmụ amaala (ndị Fijians ọtụtụ?) Bụ ndị na-eche nraranye maka Da mana ha anaghị etinye aka na okpukpe a haziri ahazi nke o kere.
Franklin Jones malitere ọrụ ya na 1970s dịka nwatakịrị, onye a na-ejighị n'aka, onye nwere obi ụtọ, onye obi ụtọ, onye nwere obi ike. Otú ọ dị, Jones na ndị òtù ya chere ihu ihe ịma aka ndị nọgidere na-aga n'ihu, gụnyere ọrụ nkụzi ya ndị na-akpali akpali, nkwupụta obi ya, na ọdịnihu nke òtù ya mgbe ọ nwụsịrị.
Jones nwetara otuto dị ukwuu maka echiche ya site n'ọtụtụ mmadụ. Ndi nkwado a choputara na otutu ederede Da bu “encyclopedic” ma zue oke. Onye prọfesọ na-amụ gbasara okpukperechi bụ Jeffrey Kripal dere na Okwu mmalite okwu a Ụkwụ nke Ntị, "Site n'ụbọchị mbụ m hụrụ akwụkwọ Adi Da (dika Da Free John) n'ihe dị ka afọ iri asatọ, amaara m na m na-agụ ọgụgụ isi okpukpe nke oge a." Dị ka onye edemede a ma ama bụ Ken Wilber si kwuo ya, "Nkwenkwe Adi Da bụ, ekwenyere m, nke na-enweghị atụ nke Hero mmụọ ọ bụla ọzọ, n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla, ma ọ bụ oge ọ bụla, nke nkwenye ọ bụla" (Wilber 80).
Dịka e kwuru n'isiokwu a, Jones nakweere okwu a "amamihe nzuzu" iji kọwaa nkuzi ya n'oge etiti afọ ndị 1970, ndị na-akwado ya gosipụtara na oke agwa ya na ndabere ahụ. Ndị na-agbachitere Jones na-ekwukarị na Jones anaghị eme ihe ọhụụ dị ka iweghachi ọdịnala oge ochie nke amamihe nzuzu na-akụzi; Agbanyeghị, ndị ọkà mmụta ekwenyeghi ma ọ dịla ihe ọ bụla a ga-amata dịka ọdịnala amamihe nzuzu, ọ bụ ezie na ọ dịlarị ndị nkuzi maara ihe. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọdịnala dị otú ahụ adịghị doo anya na omume Jones ga-adaba n'ime ya (Feuerstein 1991).
N'agbanyeghị ọnọdụ Jones chere na nkuzi amamihe nzuzu, nnukwu nsogbu Adidam chere ihu, site na mbido 1973, bụ omume dị egwu metụtara nkuzi ndị ahụ. Jones na ndị na-efe ya bipụtara ọtụtụ akụkọ banyere ike mmụọ nke Da na mgbanwe mgbanwe dị na ụmụazụ. Site na nkwenye nke onye kwere ekwe, n'ihi na Jones bụ onye kachasị nghọta, omume ọ bụla o mere bụ nke ziri ezi ma baara ndị na-efe ya uru; mgbu ha nwere ozugbo ga-eduga na nnwere onwe dị ukwuu n'ọdịnihu. Ebe ọ bụ na, site na mbara igwe, nnwere onwe ime mmụọ bụ naanị ihe dị mkpa, mgbe ahụ otu esi eduzi mmadụ ebe ahụ bụ nke abụọ. Ezigbo guru na-eji ihe arụ ọrụ.
N'otu oge ahụ, e nweela usoro nchịkọta akụkọ nke ndị na-eso ụzọ mbụ na-atụgharị uche na-egosi na Jones dị ka onye na-amịpụta ihe ma na-ebuwanye ike nke ike (shakti, na Sanskrit) ndị ji ikike ya na-adọrọ adọrọ na-erigbu, mmejọ, na mmechuihu ndị na-efe ya (Lee, dịka ọmụmaatụ, Chamberlain, "Kpachara Anya maka Chineke" nd). Ndị nkatọ ya siri ike na-arụ ụka na Jones bụ onye na-eme mkpọtụ nke nwere obi ụtọ na iweda ndị na-eso ụzọ ya ala (Lee, dịka ọmụmaatụ, Conway 2007). Fọdụ ndị bụbu ndị òtù, n'agbanyeghị na ha jụrụ Da na ụzọ ya, n'agbanyeghị nke ahụ, ha nọgidere na-ekwenye na Da nwere ikike dị omimi iji mee ka ahụmịhe nke nghọta na nghọta na ndị na-anabata ya. Otu nnukwu arụmụka nke ndị bụbu ndị otu nyere iji kwadoo ebubo ha na-erigbu bụ na n'oge "Garbage na Chi nwanyị ahụ", mgbe omume ndị dị egwu dị elu, a na-ekwu na Jones n'onwe ya na-agbaso otu ọzụzụ ahụ dị ka ndị na-eso ụzọ ya. Otú ọ dị, ndị bụbu ndị òtù enwetawo ihe àmà na-egosi na ná ndụ ya niile Da nọgidere na-a drinkụ mmanya na nzuzo, na-a drugsụ ọgwụ ọjọọ, na-enwe mmekọahụ aghara aghara, ma na-emebi ihe mgbochi nri a chọrọ n'aka ndị na-efe ya (Lowe 1996, 2005; Chamberlain 1996; Feuerstein 1991). Site n'echiche nke Da, n'ezie, nke a bụ naanị akụkụ nke iwu nkuzi mmụọ ya: "Ihe m na-eme abụghị ụzọ m dị, kama ọ bụ ụzọ m si akụzi" (Bubba Free John 1978: 53).
Ihe nke abuo bu nkwuputa nke Da, nke gha aghagh iwe ndi ndu ndi ozo ime mmụọ. O mere nkwuputa di egwu nye onwe ya na ufodu huru narcissistic.
“Ndi n’emeghi obi-mara m na obi-azaghachi m - na ndi (ya mere) ndi n’enweghi okwukwe n’ebe m no - adighi (ma pughi) mata m. Ya mere, ha (Site na Mwepu nke Onwe ha site n'aka M) Nọgide na-agbachitere na mpaghara nke ọdịdị ọdịdị, na nke na-agbanwe agbanwe oge nke ihe ọmụma na ahụmịhe nwa oge, yana oge ọmụmụ na-adịghị akwụsị akwụsị nke ọmụmụ na ọchụchọ. na ọnwụ na ọnwụ. Ndị dị otú ahụ na-enweghị okwukwe enweghị ike ikewapụ m - n'ihi na ha na-ekewapụ onwe ha kpamkpam! Ha Dị Ka Narcissus - Akụkọ ifo nke ego - Na Ọdọ mmiri Ya. Uche ha na-egosiputa onwe ha di ka enyo n'aka onye nwuru anwu (Adi Da Samraj 2003: 77-78).
Ejikọtara nkwupụta ndị a na ndị ọzọ nke na-eweda ọnọdụ mmụọ nke ndị asọmpi ya aka ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịrụ ụka na ụdị Da nke usoro asaa nke mmepe mmụọ bụ ikekwe ọgụgụ isi ya kachasị mkpa. Otú ọ dị, ọ gbanwere iwu nke nhazi n'oge oge n'ụzọ wedara ọnọdụ ndị nkụzi ndị ọzọ. Ramana Maharshi, otu ugboro zuru ọkwa nke asaa, emesiri wepu ya na ọkwa nke isii. Jesus, Buddha, na ndị ọzọ na-ewetukwara oge gafere na ọkwa nke anọ na nke ise. Kama ije ozi dị ka ụzọ dị elu maka nghọta dị elu, usoro nke asaa na-arụ ọrụ kachasị dị ka ụzọ maka Da iji weda ndị na-agba ya aka.
N'ezie, site n'ọnọdụ nke Da na ndị na-akwado ya, ọ naghị ekwu okwu dị ka mmadụ pere mpe kama ọ bụ site n'ọnọdụ nke Chineke. Nkọwa ọ bụla nke ndị na-ekiri ihe na-eche na ha hụrụ na Da bụ nanị ngosipụta nke ha onwe ha narcissism, ma ọ bụ ikekwe na-egosi na ha enweghị nghọta na enweghị mmepe ime mmụọ. (Lee “Kaadị Atọ 'Mindfuck' Atọ” nd)
N'ikpeazụ, Adidam echewo ihe ịma aka nke ndụ ya n'ọdịnihu ihu. Ndi ụlọ ọrụ, ebe nsọ, usoro ọmụmụ, weebụsaịtị, ememe, omume ofufe, usoro ntụgharị uche, na akwụkwọ ga-ezu iji debe ọdịnala ahụ dị mkpa, ka Adidam, dị ka ọtụtụ okpukpe ọhụrụ ndị ọzọ gara aga, ga-ebelata na ọgbakọ ndị meworo agadi? Da n'onwe ya kwara arịrị na ọrụ ya agabeghị nke ọma. N'agbanyeghị ederede ya, ụlọ, nkuzi, esemokwu "ihe nkiri," nnwale mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe okike, na ngọzi ụwa, ọ hapụghị ndị na-efe ya maara ihe. Ọnọdụ a nwere ike gbanwee ntakịrị dịka otu nwanyị "mmekọrịta ya na nwanyị" a na-akọ na ọ na-atụgharị uche oge niile na saịtị ili ozu Da ma nọ na ọkwa dị elu nke mmezu na Fiji. Da na-ekwukarị na ndị nkụzi ime mmụọ ndị ọzọ bara uru site n'ikwu na "ndị nwụrụ anwụ enweghị ike ịkpụ ịnyịnya ibu!" (Jones 1973b: 225). Ihe ọ pụtara bụ na naanị onye dị ndụ, na-eku ume, onye isi ike nwere ike kpalie, ma ọ bụ manye, ndị na-eso ụzọ ịchụ nnukwu àjà dị mkpa iji nweta nnwere onwe. Naanị onye nwere ndụ “pụrụ ịtụgharị uche na ha.” Ozugbo Da nwụrụ, n'ezie, ọ sonyeere ndị otu ha, n'agbanyeghị na Adidam nwara ịkọwagharị okwu ya (Lee "Adidam na Perpetuity."). O nwere ike bụrụ na Adidam ga-adịgide ndụ ruo n'ókè ndị na-efe ofufe na-anọgide na-enwe mmetụta nke mmụọ nke Da ma kwenye na ha agbanwee ya.
Adi Da (The Da Avatar). 1995. Ụkwụ nke Ige Ntị: Ọrịa Mmalite nke Mbụ na Nghọta Ime Mmụọ nke Ụwa Dị Nsọ - Onye Ozizi. New Edition Edition. Middletown, CA: The Dawn Horse Press.
Adi Da Samraj. Na "nkuzi, ngosi, na ịmara nke Ramana Maharshi." E nwetara site na "The Beezone" http://www.beezone.com/Ramana/Ramana_Teaching.html na 20 July 2013.
Adi Da Samraj, Ruchira Avatar. 2003. Aham Da Asmi (Ndị m hụrụ n'anya, m na, 3 rd ed.) Middletown, CA: The Dawn Horse Press.
Adi Da Samraj, Ruchira Avatar. 2009. "Ụzọ Isi nke Iri Na-esite n'Ọdịnihu." Aletheon . Ekepụtara na "The Beezone" wee nweta http://www.beezone.com/AdiDa/Aletheon/the_seventh_stage_of_no_stage.html na 1 July 2013.
"Adi Da na-ekwu banyere ọdịda nke afọ 30 ikpeazụ." Achọpụtara site http://lightmind.com/library/daismfiles/failures.html ruru site na iji Internet Wayback Machine na 21 May 2013. A na-edebe nke a ozugbo na weebụsaịtị Daism Research Index, ma a ewepụwo ihe dị mkpa na Intanet.
"Adidam na Perpetuity." Nweta site na http://www.adidaupclose.org/Adidam_In_Perpetuity/ na 20 July 2013.
Ma, Katy. 1985. "Mmekọahụ ndị ohu na-alụ nwanyị: Pacific Orle Orgies Charged." San Francisco Chronicle , April 4.
Chamberlain, Jim. 1996. "Lezie anya maka Chineke" http://bewareofthegod.blogspot.com na July 11, 2013.
Conway, Timothy. 2007. "Adi Da and His Voracious, Abusive Personality Cult." Nweta site na http://www.enlightened-spirituality.org/Da_and_his_cult.html na 2 July 2013.
Feuerstein, Georg. 1991. Mkpụrụ obi dị nsọ: Ụdị na-atụ egwu na ihe ndị na-akpali akpali nke Ozizi nke ndị nzuzu-ndị maara ihe, ndị nzuzu dị nsọ, na Rascal Gurus. New York: Ụlọ Paragon.
Free John, Bubba. 1974. Egwu na Chineke: Ọrụ Ebube Ikpeazụ na ntụziaka ime mmụọ ikpeazụ nke Bubba Free John, edeziri Sandy Bonder na Terry Patton. Lower Lake, CA: The Dawn Horse Press.
Free John, Bubba. 1978. Nghọta nke Ahụ dum . Middletown, CA: The Dawn Horse Press.
Goldberg, Phillip. 2010. American Veda: Site na Emerson na Beatles na Yoga na Ntụgharị uche-Olee Otú Ime Mmụọ nke India si gbanwee West. New York: Akwụkwọ Ekekọrịta.
Jones, Franklin. 1973a. Ụkwụ nke Ntị (2 mbipụta). Los Angeles, CA: The Dawn Horse Press.
Jones, Franklin. 1973b. Usoro Siddhas. Los Angeles, CA: The Dawn Horse Press.
Kripal, Jeffrey J. 2005. "Ịnyịnya ịnyịnya ibu: Adi Da na Eros nke Nonduality." Pp. 193-217 naGurus Na America, nke Thomas Forsthoefel na Cynthia Ann Humes dere. Albany, NY: SUNY Press.
Lattin, Don. 1985. "Guru Hit site Sex Slave Suit." San Francisco Examiner, April 3. Nweta site na http://www.rickross.com/reference/adida/adida16.html na 11 July 2013.
Lee, Carolyn. 1998. CHINEKE CHINEKE - NDỊ ANYỊ BỤ: Ndụ Ndị Kasị Mma-Akụkọ, Ọrụ "Nzuzu" nke Akwụkwọ Nsọ, Ọrụ "Ụwa Na-eweta Ngọzi" nke "Ụwa Na-eweta Ọkụ" nke Onye Nkụzi Chineke-Onye Ozizi nke "Oge Nkwụsị", RUCHIRA AVATAR ADI DA SAMRAJ. Middletown, CA: The Dawn Horse Press.
Lowe, Scott na Lane, David. 1996. Da: Frank Frank Jones Jones. Ube, CA: Mt. San Antonio College Philosophy Group.
Lowe, Scott. 2006. "Adidam." Pp. 85-109 na Okpukpe ọhụrụ na nke ọzọ na United States, olu 4, nke Eugene V. Gallagher na William M. Ashcraft dere. Westport, CT: Onye nlekọta.
"Akaebe nke Onwe nke Avatar Adi Da Samraj." 2008. Nweta site na http://www.adidam.in/Testimonials.asp na 6 August 2008.
Ranker.com. "Adi Da Books List." Nweta site na http://www.ranker.com/list/adi-da-books-and-stories-and-written-works/reference?page=1 na 5 July 2013.
Rodamore, William. "Isi Nzuzo nke Swami Muktananda." Nabatara na http://www.leavingsiddhayoga.net/secret.htm na 10 July 2013.
"The atọ Kaadị 'Mindfuck' Atọ." Nweta site na http://www.kheper.net/topics/gurus/Three_Cards_Trick.html na 1 July 2013.
"Ọdịdị Transcendental: Art nke Adi Da Samraj." 2013. Nweta site na http://www.daplastique.com/art/index.html na 8 August 2013.
"Gaa na Sanctuaries nke Adidam." Nabatara na http://www.adidaupclose.org/FAQs/visiting_sanctuaries.html na 16 July 2013.
Wilber, Ken. 1995. Gaa na ncha ihu na azụ azụ nke mbipụta 1995 Ụkwụ nke Ntị . Enwere ike ịchọta nkwupụta okwu ịnụ ọkụ n'obi Wilber na mkpuchi nke ọtụtụ mbipụta nke akwụkwọ Da.
ADIDAM NDỊ VIDIO NDỊ VIDIO